पुरुषहरु किन महिलाको स्तनमा आकर्षित हुन्छन ? यस्तो छ रहस्य -
तपाईंलाई थाहा छ पुरुषहरु महिलाको स्तनमा किन आकर्षित हुन्छन् ? आखिर किन उनीहरुको यो बानीलाई मानिसहरुले कामवासनाको रुपमा हेर्ने गर्दछन् ? यो प्रश्नले महिलाहरुमाथि पनि त्यत्तिकै खुल्दुली मच्चाइरहेको होला । तर यसको जवाफ पुरुषहरुसँग पनि छैन । आउनुहोस्, यो सँग सम्बन्धित केहि तथ्यपरक कुराहरुको बारेमा जानकारी लिऔँ।
स्पष्ट रुपमा पुरुषहरु कहिले पनि उनीहरु महिलाको स्तनप्रति किन यति धेरै आ’कर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा बताउन सक्दैनन् । यसमा भएको अध्ययनमा थुप्रै कारणहरु पत्ता लागेका छन् । जब पुरुषहरु महिलासँग कुराकानी गर्न थाल्छन् तब उनीहरुको आँखा महिलाहरुको आँखामा नभई बक्षस्थलमा हुने गर्दछ । त्यसपछि उनीहरु गर्दनमा हेर्ने गर्दछन् र त्यसपछि मात्र आँखामा पुग्छन् ।
उनीहरु बिस्तारै बिस्तारै आफनो ह’र्मोनको आदेश अनुसार वक्षस्थलमा नियाल्न पुग्दछन् । यस्तो ‘बडि ल्याङ्वेज’ भएका पुरुषहरुलाई महिलाहरुले तुरुन्त पत्ता लगाइहाल्छन् र उनीहरुलाई का’मवासना भएको पुरुषको संज्ञा दिने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक पटक पुरुषहरुको मानसिकता गलत हुँदैन ।
थुप्रै अध्ययनका आधारमा कुराकानीको सुरुवाती अवस्थामा पुरुषहरुले महिलाको व’क्षस्थललाई नै हेर्ने कुरा पत्ता लागेको छ । वास्तवमा पुरुषहरुलाई लाग्छ कि स्तन नै उनको नारित्वलाई सार्थक बनाउने एउटा वस्तु हो र सेक्सफीलको माध्यमले कनेक्सन स्थापित गर्दछन् ।
यदि स्तन आ’कर्षक छ भने पुरुषहरु कुराकानीमा राम्रोसँग ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनन् उनीहरुको मन मस्तिष्कले उनीहरुलाई जबर्जस्ती स्तनतर्फ आकर्षित गराइरहेको हुन्छ । त्यसकारण नचाहँदा नचाहँदै पनि धेरैपटक पुरुषको नजर स्तनमा अडिग भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले पुरुष कामुक भएको सोच्ने गर्दछन् ।
अध्ययनका अनुसार यदि महिला टाढा छिन् र ती पुरुषलाई हेरिरहेकी छैनन् भने पनि ९५ प्रतिशत पुरुषको आँखा महिलाको छातीमा नै हुन्छ । सम्भोगको दौरान पनि स्तनले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । चरम सिमासम्म पुग्नका लागि स्तनले ठूलो मद्दत गर्दछ । वास्तवमा धेरै पटक से क्सको सुरुवातमा पनि यसबाट नै हुन्छ । राष्ट्रिय खबर डटकम बाट साभार
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यो वर्ष भत्ता नलिने, नारायणकाजीको तलब राज्यलाई
अर्घाखाँचीमा बिहिबार थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, जिल्लामा संक्रमितको संख्या ४ पुग्यो
दिनमा १ पटक सेक्स गरिएन भने म पागल हुन्छु – के यो रोग हो या मेरो वैश चढेको हो ?